Toekarena sy politika : hamaha olana ny fahantrana ny FMI Malagasy | NewsMada
Toekarena sy politika : hamaha olana ny fahantrana ny FMI Malagasy
Par Taratra sur 04/08/2016
Hitondra famelabelarana momba ny toekarena sy ny politika ny eo anivon’ny fikambanana Fahefa-mividy izao no takin’ny Malagasy (FMI Malagasy). Lohahevitra : « Ny vahaolana mahomby hampihenana ny fahantrana ary hialana amin’izany ka hihatra avy hatrany amin’ny Malagasy tsirairay ».
Anisan’ny fotokevitra ijoroan’izy ireo ny fanafoanana ny Mid (Marché interbancaire des devises). Ny fametrahana ny taham-bola tsy miovaova (Système de taux de change fixé) ary ny fampiakarana ho 100% ny sandan’ny Ariary. « Anisan’ny ahatongavana amin’izany ny didim-panjakana raisin’ny filankevitry ny minisitra », hoy ny FMI Malagasy.
Hatao ny asabotsy 6 aogositra izao etsy amin’ny Arrupe Faravohitra, manomboka amin’ny 9 ora maraina ity famelabelarana ity. Hitarika izany ny mpanorina ny fikambanana, Ratsietison Jean Jacques. “Anisan’ny mampahantra antsika io Mid io. Hapetraka ny taham-bola tsy miovaova ka hihena antsasany avy hatrany ny fahefa-mividin’ny Malagasy. Hidina hatrany amin’ny antsasany ny vidin’ny solika…”, hoy izy. Tsy ny famoronana asa koa no atao voalohany fa ny mba ananan’ny Malagasy fahefa-mividy ka ahafahany mividy sakafo, mitsabo tena ary manana ambim-bava, araka ny nambarany. Ho tonga hatraiza izao dingana takin’ny FMI Malagasy izao ?